Ny Semalt no mahalala ny fomba hanakanana Spam an'i Google Analytics
Lasa sehatra iraisan'ny orinasa ny varotra e-varotra. Ny mpitoraka blaogy sy tompon-tranonkala hafa dia mahita fa tena ilaina tokoa ny fampiroboroboana ny digital mahomby ho an'ny tranonkala. Amin'ny ankabeazan'ny tranga, ireo mpampiasa tranonkala sy tomponà tranonkala dia mampiasa ny fahaiza-mividy nomerika toy ny marketing marketing sy ny Search Engine Optimization mba ahazoana antoka fa ny votoatin'ny tranonkala dia tsara indrindra ho an'ny fampiharana amin'ny aterineto. Ny ankamaroan'ny marketing ara-nomerika dia miankina amin'ny matihanina matihanina matihanina mba hahazoana antoka fa hitombo tsara ny tranokalany. Misy fomba maro ahafahanao manamboatra Internet amin'ny aterineto ny fiantraikany amin'ny orinasa an-tserasera. Ohatra, maro ireo orinasa afaka manatanteraka hetsika maromaro amin'ny Internet amin'ny seo SEO.
Mety misy spam maloto ny Google Analytics. Ity fitaovana ity dia mahazatra ho an'ireo webmaster rehetra mba hahazoana fahalalana sy fomba hanatsarana ny fanovana eo amin'ny fomba fiasa manontolo. Amin'ny tranga maro, ny olona dia mijaly noho ny voka-dratsin'ny adihevitra amin'ny Google Analytics. Ity spam ity dia mety ahitana hafatra maromaro avy amin'ny sehatra tsy fantatra. Amin'ny ankabeazan'ny tranga, ny fanafihana spam malaza amin'ny Google Analytics dia avy amin'ny domains anaty lisitra..Zava-dehibe ny hifikitra amin'ny drafitra izay amin'ny farany ho an'ny famaranana tsara. Maro ireo orinasa tsy mahomby amin'ny drafitry ny varotra raha tsy miraharaha ny mety hisian'ity fanafihana spam ity.
Andrew Dyhan, Mpanantanteraka Success Successor Semalt Digital Services, dia mamaritra ny olana ara-pitsarana sasany azonao atao.
Bot sy botnets
Misy famonoana rindrambaiko sasany izay manao asa tsara sasany. Ireo robots dia manandrana manamboatra robot ara-batana ao amin'ny rindrambaiko. Ohatra, ireo robots Google dia manana tanjona goavana ho an'ireo sehatra azo itokisana ary ireo izay mety tsy hanome alalana ny tetik'asa tsara. Hevitra maro mikasika ny fitsabahana amin'ny Google Analytics no miankina amin'ny hacker bots. Botnets dia ahitana andian-tsambo maro izay mikendry sehatra iombonana. Ny fanafihan'ny botnet dia mahatonga ny fampihorohoroana amin'ny tranonkala manontolo henjana. Azon'izy ireo atao ny manafika ny Denial of Service noho ny fanafihana amin'ny seriver izay mora vaky amin'ny fanafihana. Ny olona manao tranokala ho an'ny tranonkala e-commerce dia afaka mandray soa avy amin'ny bots. Ohatra, ny fampiasana fitaovam-pikarohana dia mampiasa ireo sora-tanana lehibe ireo mba hikirakirana votoatin'ny tranonkala. Amin'ny alalan'ireny fomba ireny, ny spam referral dia mety ho avy amin'ny boka ratsy.
Ny tranonkala e-commerce maro dia miankina amin'ny bots mba hahatonga ny tranokalany ho tsara. Amin'izany fomba izany, mahazo tombony amin'ny tsena izay misy ao amin'ny aterineto. Ohatra, ny fandraharahana toy ny orinasa e-commerce dia afaka manamboatra fivarotana maro avy amin'ireo mpanjifa izay avy amin'ny aterineto. Fanodinkodinana Google Analytics Maloto Mety ho avy amin'ny botsaka ny spam ary manangana tranonkala ahitàna fahavoazana maro ateraky ny aterineto. Ireo mpampiasa aterineto dia tokony hahafantatra tsara ireo fanafihana bot bot sy ireo famonoana maro samihafa amin'ny aterineto. Amin'izany fomba izany dia lasa mora kokoa ny tranonkala ho an'ireo hackers izay mikendry ny hangalatra ny fampahalalana mpanjifa na ny angon-drakitra mpampiasa toy ny fampahalalana momba ny carte de crédit. Ity toro-lalana SEO ity dia afaka manampy ny ezaka ataonao hiala amin'ny spam-referencera Google Analytics. Azonao atao ny manangana tranonkala iray izay azo antoka amin'ny fiatrehana ireo karazana fandrahonana amin'ny aterineto rehetra. Amin'ny fampisehoana tranonkala rehetra, dia tadidio foana ny antoka fa manana rafitra fiarovana azo antoka momba ny SEO ianao Source .